प्रतिआना मासिक साढे नौ रुपैयाँ... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
पर्यटकीय क्षेत्र चाबहिल-बौद्धको मूल सडकनजिक जग्गा भाडामा लिँदा प्रतिआना कति मोल तिर्नुपर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने पशुपति विकास कोषले हायात रिजेन्सी होटललाई दिएको जग्गाको भाडा रकम हेर्नुपर्छ। कोषले व्यापारिक निकाय हायात होटललाई एक आना जग्गा लिजमा दिएबापत मासिक नौ रुपैयाँ ५० पैसा भाडा लिइरहेको छ भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। तर, वास्तविकता यही हो। कोषले उक्त होटललाई १८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ। तर, यसबापत कोषले प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएको छ। यो खबर गोपीकृष्ण ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गुठी जग्गाको उपयोगअनुसार कुतबाली तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी वा संस्थागत रूपमा करोडौं, अर्बौ आम्दानी गर्नेले दिने तिरो कौडीको भाउसरह छ।' उनले आफू कोषमा रहँदा प्रयोग र आम्दानीका आधारमा तिरो तोक्न पहल गरेको तर त्यसमा अनेक बाधा-व्यवधान आइपरेको बताए। ‘होटलजस्ता अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले गुठी जग्गा दुरुपयोग गरिएका छन्, प्रयोग गर्न पाउँछन् तर कोषले प्रयोग र आम्दानीअनुरूप रोयल्टी लिन सक्नुपर्छ,' डा. टण्डनले भने।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २९, २०७४, ०५:१२:३६